Maraykanka oo wasiirka arimaha dibada Sweden ku tilmaamay Ey | Somaliska
Mid ka mid ah dokumintiyada sirta ah ee uu fashilay websiteka Wikileaks ayaa soo bandhigay qoraal sir ah oo uu safiirka maraykanka u fadhiya Sweden ku tilmaamay Wasiirka Arimaha dibada Sweden Carl Bildt "Ey awood dhexe leh". Dokumintiga oo la qoray sanadkii la soo dhaafay ayay safaarada ku sifaysay wasiirka nin laga xushmeeyo Sweden balse xirfadiisa siyaasadeed ay hooseyso. Mar uu wasiirka la kulmayay xoghaya Amaanka ee maraykanka ayay safaarada ka digtay awooda Bildt uu u leeyahay in uu qofka hadalkiisa marsiiyo asagoo isticmaalaya hadal maldahan. Wasiirka ayaa sidoo kale lagu sifeeyay mid xiriir aad u dhow la leh raysal wasaaraha Sweden asagoo wasiirku mararka qaar go'aamo kaligiis kaara. Sirta uu fashilay Websiteka wikileaks ayaa ceeb ku noqotay maraykanka ayadoo dokumintiyada la soo bandhigay inta badan lagu aflagaadeynayo madaxda caalamka.
Maraykanka oo wasiirka arimaha dibada Sweden ku tilmaamay Ey
Mid ka mid ah dokumintiyada sirta ah ee uu fashilay websiteka Wikileaks ayaa soo bandhigay qoraal sir ah oo uu safiirka maraykanka u fadhiya Sweden ku tilmaamay Wasiirka Arimaha dibada Sweden Carl Bildt “Ey awood dhexe leh“.
Dokumintiga oo la qoray sanadkii la soo dhaafay ayay safaarada ku sifaysay wasiirka nin laga xushmeeyo Sweden balse xirfadiisa siyaasadeed ay hooseyso.
Mar uu wasiirka la kulmayay xoghaya Amaanka ee maraykanka ayay safaarada ka digtay awooda Bildt uu u leeyahay in uu qofka hadalkiisa marsiiyo asagoo isticmaalaya hadal maldahan.
Wasiirka ayaa sidoo kale lagu sifeeyay mid xiriir aad u dhow la leh raysal wasaaraha Sweden asagoo wasiirku mararka qaar go’aamo kaligiis kaara.
Sirta uu fashilay Websiteka wikileaks ayaa ceeb ku noqotay maraykanka ayadoo dokumintiyada la soo bandhigay inta badan lagu aflagaadeynayo madaxda caalamka.
Wadankii ugu horeeyey oo reer-galbeed ah oo aqoonsaday dawladda Falastiin
Sweden oo cabsi ka qabta weeraro argagixiso
December 6, 2010 at 18:23
caadi mahan waa mid lobahanyahay sirta siyasada calamka ee ku dhisan is daba mareynta
Mr shanle says:
December 9, 2010 at 05:28
Sxb runti waa arrin lo bahanyahay fashilka u sameyay website ka